Inkqubo yokuYila ye-MIM
Ukuqonda okunzulu komthengi wetekhnoloji ye-Metal Inalion Molding, siza kuthetha ngokwahlukeneyo ngayo yonke inkqubo ye-MIM, masiqale kwinkqubo yokwenza namhlanje. Powder bokwakha ubuchwepheshe yinkqubo ukuzalisa umgubo pre-exubileyo kwisisu eyenzelwe, isicelo uxinzelelo oluthile t ...
Namhlanje lusuku lokuqala lokusebenza lwango-2021. Kule meko, iqela le-KELU lithatha iminqweno yethu kubo bonke abathengi bethu. Wonwabile 2021! Nyakhomtsha! Ndinqwenela ukuba ishishini lakho liphumelele ngakumbi ngo-2021! Ndinqwenela ukuba wena nosapho lwakho nibe sempilweni kwaye nonwabe ngo-2021! Ndinqwenela ukuba intsholongwane ihlale ikude kuwe nakubo bonke abantu o ...
Njengoko sisazi, ulawulo lobushushu sisitshixo esifanelekileyo sokwenza konke okune-thermal, izixhobo ze-differnet zifuna unyango olwahlukileyo, kwaye kwanezinto ezifanayo ezinobunzima obahlukeneyo, ikwafuna ukuguqulwa kulungelelwaniso lobushushu. Ubushushu ayisiyiyo kuphela eyona nto ibalulekileyo kwi-thermal pr ...
Iziphumo zoNyulo lwase-US kwimarike ye-tungsten?
Kwiiveki ezimbini, intengiso igxile kwi-US #Ukhetho. Ngaba iziphumo zonyulo ziya kuba nefuthe kwintengiso ye-tungsten? Kunokwenzeka okanye kuncinci kunokwenzeka. Umzekelo, ukhetho lomgaqo-nkqubo wabantu abanyuliweyo luchaphazela imeko yezoqoqosho lwamanye amazwe kunye nobudlelwane bezorhwebo phakathi kwe-Sino-US, ngaloo ndlela ku ...
I-Tungsten ekhusela i-X ray-isicelo se-tungsten ongasaziyo
I-alloy esekwe kwi-Tungsten ephezulu yi-alloy eyenziwe nge-tungsten njenge-matrix kunye nenani elincinci le-nickel, isinyithi, ubhedu kunye nezinye izinto. Ayinaxinano oluphezulu kuphela (~ 18.5g / cm3), kodwa ikwakhona ukulungelelanisa kunye namandla okufumana imitha yamandla aphezulu (kune-radiation abso ...
Ukwanda kwesabelo sentengiso ye-tungsten
Imakethi ye-tungsten yehlabathi kulindeleke ukuba ikhule ngokukhawuleza kule minyaka imbalwa izayo. Oku ikakhulu kungenxa yesicelo semveliso ye-tungsten kumashishini amaninzi anjengeemoto, i-aerospace, imigodi, ukhuselo, ukulungiswa kwesinyithi, kunye neoyile kunye negesi. Ezinye iingxelo zophando ziqikelela ukuba ngo-2025, ...
Izakhono ezisisiseko zokuloba ngejig
I-Tungsten Jigs zisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezahlukeneyo zokuloba, nokuba yeyiphi eyokuzonwabisa okanye eyokuloba, ihlala inceda ii-anglers ukufumana isivuno ngakumbi. Ngokwembono yosetyenziso olulula lwejig, ayinayo imixholo yobuchwephesha, kodwa iboshwe kuphela ngomgca, kwaye akukho nzima kangako kwi-operta ...
Yintoni ukusetyenziswa kwe-MIM? Kunye neemveliso zeTungsten?
Ngokusekelwe eziluncedo Metal Inaliti Ukubumbela, iimveliso ezivela MIM zifaneleke ngakumbi amashishini ezifuna iindawo kunye nesakhiwo entsonkothileyo, uyilo entle, ubunzima ukulinganisela, kunye nemveliso. Thatha iimveliso ze-tungsten ezenziwe yi-MIM umzekelo, iTungsten inophawu ...
Ungayikhetha njani i-darts?
ngomphathi ku 20-04-24
Zininzi iintlobo zemijukujelwa kwintengiso, ukusuka kubhedu ukuya kwi-tungsten. Okwangoku, eyona idumileyo yi-tungsten nickel dart. I-Tungsten sisinyithi esinzima esilungele imijukujelwa. I-Tungsten ibisetyenziswa eDarts ukusukela kwii-1970s zokuqala kuba inobunzima obuphindwe kabini kunobhedu, kodwa iidolo ezenziwe ...
Kutheni usebenzisa i-tungsten njengobunzima bokuloba?
Izitshini ze-tungsten ziba ngakumbi nangakumbi izinto ezidumileyo ze-bass anglers, kodwa ngokuthelekisa nomkhokeli, kubiza kakhulu, kutheni u-Tungsten? Ubungakanani obuncinci be-Lead yi-11.34 g / cm³ kuphela, kodwa i-tungsten alloy inokufikelela kwi-18.5 g / cm³, oko kuthetha ukuba umthamo we-tungsten sinker i ...
UYA YAKHO INKQUBO YOKWABIANA NGOKUGQIBELELEYO